महिलालाई सताउने पाँच रोगहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
महिलालाई सताउने पाँच रोगहरु !!
कतिपय रोग यस्ता हुन्छन् जो पुरुषलाई मात्र वा महिलालाई बढी असर गर्न सक्छ । जस्तो प्रोस्टेट क्यान्सर पुरुषलाई लाग्छ, स्तन क्यान्सर महिलालाई । भलै स्तन क्यान्सर पुरुषलाई पनि लाग्न सक्छ, तर दुलर्भ मात्रामा ।
पाठेघरको क्यान्सर वा प्रजन्न सम्बन्धी कुनैपनि समस्याले महिलालाई मात्र सताउने गर्छ ।
यसरी रोग पनि महिला वा पुरुषमध्ये एकलाई बढी सताउने किसिमका हुन्छन् । अतः यहाँ महिलालाई बढी सताउने रोगबारे चर्चा गरिएको छ । जस्तो कि मुटु रोग, स्तन क्यान्सर, ओस्टियोपोरोसिस, तनाव तथा अटो इम्युन डिजिज ।
आज मुटु सम्बन्धी रोगकै कारण कयौ महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । कयौ विकलांग हुन पुगेका छन् । मुटु सम्बन्धी रोगकै कारण कयौ महिला सिढी चढ्न, ओर्लन असर्मथ हुने, सास लिन कठिनाई हुने समस्या भोग्दै आएका छन् ।
मुटु सम्बन्धि रोगमा पनि कोलोनरी मुटु रोग सबैभन्दा घातक हो । त्यसबाहेक पनि यस्ता अन्य धेरै रोग छन्, जसले महिलाहरुको शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
स्तन क्यान्सर महिलाहरुमा हुने क्यान्सर मध्यको प्रमुख हो । नेपालमा करिब चार प्रतिशत पुरुषमा मात्र स्तन क्यान्सरको समस्या देखिएको छ । तर जनचेतनाको कमी तथा भयका कारण महिलाहरु महिलाहरु स्तन क्यान्सरको जाँचको लागि समयमै अस्पताल जाँदैनन् ।
जसले गर्दा उनीहरुमा स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्ने गर्छ । समयमै उपचार गरेको खण्डमा स्तन क्यान्सको उपचार सम्भव छ । यसको लागि समयमै स्तनको स्क्रिनिङ्ग जरुरी छ ।
ओस्टियोपोरोसिस रोगले पनि मानिसहरुलाई बेलाबेलामा तर्साउने गर्छ । महिलाहरुमा चालीस वर्षको उमेर पछि ओस्टियोपोरोसिस रोग देखिन सुरु गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मु्टु रोग पश्चात्त ओस्टियोपोसिस विश्वकै ठूलो स्वास्थ्य समस्या हो । ओेस्टियोपोसिस भएमा हड्डी कमजोर भई भाँचिन सक्छ । यसले हड्डीलाई यति धेरै कमजोर बनाइदिन्छ कि साधारण चोटपटक लागेमा पनि हड्डी भाँचिने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यद्यपि यो रोगबारे अझै पनि धेरै महिला अनविज्ञ छन् । त्यसैले, यसको जोखिमबारे धेरैलाई जानकारी नहुनस सक्छ ।
किनकी यसको लक्षण खासै देखिदैन । यद्यपी, समयमै उपचार गरे यो रोगले निम्त्याउने अन्य रोगबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । यदी तपाईंमा पनि यस्तै कुनै रोग देखिएको छ भने तुरुन्तै चिकित्सकसित परामर्श गर्न जरुरी छ । अन्यथा, यसले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
विधान कार्कीलाई भारतमा ‘उत्कृष्ट म्यूजिक भिडियो कन्सेप्ट’को अवार्ड
अमरेशले शेरबहादुर देउवालाई बुझाए राजीनामा पत्र